के आर्यनले करियरकैलागी रोजेका हुन त साम्राज्ञीलाई?. - Gaule Media ::
Home/मनोरञ्जन/के आर्यनले करियरकैलागी रोजेका हुन त साम्राज्ञीलाई?.
ramsharan२१ कार्तिक २०७४, मंगलवार ०५:०९
नेपाली फिल्म क्षेत्रमा स्टार कहलिएकाहरुको कुन बेला स्थान गुमनाम हुन्छ भन्ने कुरा पत्तै हुदैन । त्यसै मध्यका एक स्टार हुन् आर्यन सिग्देल । आर्यन एकताका निकै व्यस्त कलाकारको रुपमा रहेका थिए । तर पछिल्लो समय आफ्नै होम प्रोडक्शन र होम प्रोडक्शन बाहिरका फिल्महरु लगातार व्यवासायिक रुपमा असफल भएपछि उनी तनावमा परेका थिए ।
आफ्नो करिअर बचाउनकै लागि उनले रेखा थापासँग ८ बर्ष पछि सहकार्य गरेर फिल्म रुद्रप्रियामा अभिनय गरे । तर उनले रुद्रप्रियाको पात्र र आफुलाई तुलना गर्न नसक्दा फिल्म मात्र फ्लप भएन उनको करिअरमै अर्को खतरा आईपुग्यो । कुनै समय निकै व्यस्त आर्यन अहिले निकै फुर्सदिला भएका छन् ।
भलै उनले आफ्नै होम् प्रोडक्शनमा फिल्म बनाउने कुरा चल्न थालेको छ । फिल्म रुद्रप्रियामा सहकार्य गर्दा उनले आफ्नो होम प्रोडक्शनका केही सहपाठीहरुसँगको सम्बन्ध पनि गुमाउनु परेको थियो ।
आर्यनलाई एकातिर करिअर बचाउनको चिन्ता छ भने अर्कोतिर फिल्ममा हिरोईन को राख्ने भने चिन्ता पनि रहेको छ । तर उनले आफ्नो करिअर रक्षाकै लागि नायिका साम्राज्ञी राज्यलक्ष्मीदेवी शाहलाई लिने निर्णय गरेको हल्ला बाहिरिएको छ । पहिलो फिल्म ड्रिम्स बाट नै हिट भएकी साम्रज्ञीको दोश्रो फिल्म ए मेरो हजुर २ पनि हिट भयो ।
उनको तेश्रो फिल्म तिमीसँग प्रदर्शनको तयारीमा रहेको छ भने छायाँकनको तयारीमा ईन्टु मिन्टु लण्डनमा नामक फिल्म रहेको छ । बेलायत सरकारले भिषा नदिईएपछि अहिले सो चलचित्रको छायाँकन शुरुहुन सकेको छैन ।
व्यस्त नायिका साम्राज्ञीलाई लिदाँ प्रोमोशन र ब्याकअफ दुबै मिल्ने भएकाले पनि आर्यनले साम्राज्ञीलाई लिएको बुझ्न सकिन्छ । अझ भनौं सेफ ल्याण्डिङको लागि साम्राज्ञी आर्यनको लागि फिट भएकी हुन सक्छिन् ।
साम्राज्ञीले भने राम्रो पारश्रमिकका कारण फिल्म गर्न मञ्जुर भएकी अनुमान लगाउन सकिन्छ । आर्यन सिग्देल ईन्टरटेन्मेन्टको ब्यानरमा निर्माण हुने फिल्मको नाम भने सार्वजनिक गरिएको छैन ।
सबै कुरा मौखिक रुपमा भईसकेको तर औपचारिक सम्झैता बाँकी रहेको आर्यन निकट स्रोतले जनाएको छ । चकलेटी स्टार आर्यनले करिअर रक्षाकै लागि साम्राज्ञी रोजेता पनि दर्शकले यी जोडिलाई कतिको रुचाउने हो त्यो पछि नै थाहा होला ।